Qorataamn Tokkummaa Mootummootaa Gara Zimbaabuwee Imalan
Fulbaana 18, 2019
Faayilii - hiriira butamuu doctor Piitar mormuudhan hojjattonni fayyaa geggeessan, Zimbaabuwee
Qorataan addaa ka Tokkummaa Mootummootaa – Kilement Voolee, haala qabinsa mirga dhala-namaa Zimbaabuwee, keessumaa waa’ee mirga walga’ii karaa nagaa geggeeffachuu fi jaarmayaa dhaabbachuu ilaalchisee qorannaa geggeessuuf guyyaa kudhaniif gara biyyattiitti bobba’anii jiran.
Yeroo gurmuuleen mirga dhala-namaa waa’ee qabsaa’onnii fi falmitoonni mirgaa biyyattii keessatti butamanii dhabamsiifamuu yaaddoo qaban ibsaa jiranitti qorataan mirga dhala-namaa Tokkummaa Mootummootaa kun gara biyyattiitti deeman.
Kanneen dhiheenya Zimbaabuwee keessatti butamanii fudhataman keessaa tokko – Hoogganaa Waldaa Dooktoroota Fayyaa – Gabri’eel Mogaambee ilaalchisee, Dooktoroonni fi nersoonni biyyattii shaamaa qabsiisuudhaan deebisamuu isaaf kadhataa jiran.
Ministarri Eegumsa Fayyaa Zimbaabuwee – Obedaayaa Mooyyoo garuu, waa’ee dhabamuu Mogaambee keessaa mootummaan akka harka hin qabne dubbatu.
Humnootii Sudaan Nutii Hin Haleellee: Itiyoophiyaa